विदेशी ज्वाईं लाई पनि नागरिकता देऊ भन्नुहुन्छ देउवा,,ताली या गा’ली?? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
विदेशी ज्वाईं लाई पनि नागरिकता देऊ भन्नुहुन्छ देउवा,,ताली या गा’ली??
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि नागरिकता दिन सर’कारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले लैंगिक विभेद नहुने गरी नागरिक विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । देउवाले घुमाउरो पारामा विदेशी ज्वाईलाई पनि नागरिकताको प्रबन्ध गर्न नेकपासँग माग गरेका हुन् ।
उनले बुधबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग लिङ्गको आधारमा विभेद नहुने गरी समानताको अवधारणा र मर्मअनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने, तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन।’
‘महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिङ्गको आधारमा विभेद नहुने, अनि समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।
संविधानले महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभापति देउवाले छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य नभएको प्रष्ट्याएका छन् ।
‘हाम्रो संविधानले महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ । छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि,’ उनले भनेका छन्।
Next नेताका गलामा कोरोना भगाउने कार्ड, कसले दियाे त ?,,,,हेर्नुहोस्।
56 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता